I-condo yonke yi-NASA, isikhululo seenqwelomoya, iindlela ezinkulu, ivenkile
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguSusan And Dennis
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uSusan And Dennis iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
4 recent guests complimented Susan And Dennis for outstanding hospitality.
Sine-condo ehlaziyiweyo entle, ecocekileyo. Ikufuphi neSikhululo seenqwelomoya saseHopkins, iNASA, iGreat Northern shopping complex, iSibhedlele saseFairview, iKamm’s Corners, iFat Heads Brewery, zonke iindlela ezinkulu eziphakathi kunye nedolophu yaseCleveland. Ifakwe ngokupheleleyo iibhedi ezimbini zookumkanikazi, iilinen, iWiFi, ikhitshi esebenza ngokupheleleyo (izitya, iimbiza / iipani, izinto zesilivere) kunye neebhafu eziyi-1 1/2. Ikwakufuphi ngokufanelekileyo ne-BWU.
Indawo ye-condo inayo ichibi kunye negumbi letheko onokuthi uliqeshe. Indawo yokupaka iCarport iyafumaneka. I-Starbucks ibekwe ngaphaya kwesitrato, kunye neRobeks Smoothies. Iindawo zokutyela ezininzi zikufuphi.
Njengoko kuchaziwe ngaphambili, sibekwe ngokulula kwiindawo ezininzi ezikwicala laseCleveland esentshona kunye nohola bendlela. Yindawo ekhuselekileyo. Usenokufuna imoto okanye u-Uber ukuze ujikeleze. Sisondele kakhulu kwiiMetroparks apho kukho iindlela zokuhamba kunye neebhayisikili.
Umbuki zindwendwe ngu- Susan And Dennis
Singathanda ukukubulisa kwaye sikunike izitshixo. Sikufutshane kwaye sikhona ngokuqinisekileyo ukukhwela, ukukhokelwa, kunye nemibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- North Olmsted